Permalink Reply by zan zan on November 27, 2009 at 14:19
I give u some suggestion that CEPC at YMCA is good.
Now, i am still poor but i believe that i will more improve at CEPC, later.
If u want to know more, u can contact me!
Permalink Reply by thaesaint on November 30, 2009 at 15:05
What does it mean "CEPC"? I am in mandalay, so I wonder whether there are such classes in Mdy? What should I do at CEPC? Do I have to pay fees? What qualifications do I need?
Permalink Reply by zan zan on July 1, 2011 at 17:44
sorry! i didn't use this network foralongtime. i know better one than CEPC. It is very good for me. There are4teachers; two are locals and two are foreigners. it starts from 8:00am to 12:00pm. it is five days peraweak and three months. it has to sit placement test. it is Campion Institute, in St.Augustin Church, near St.Augustin School (BEHS N0.2), inya street, Yangon. i recommend it.
Permalink Reply by Saw Hsa Gay Doh on April 18, 2010 at 19:10
hay, i am intrested in CPEC ,can i know more details ?
Permalink Reply by zan zan on July 1, 2011 at 17:45
Permalink Reply by nancherrycho on July 1, 2011 at 20:58
i interesting to ur device!so can u tell me location of Ymca n what matter need to attend in CEPC at YMCA with detail.
Permalink Reply by Aye Myat Zaw on November 30, 2009 at 13:49
I am english leaner and I have attend the so many classes but now I study myself to improve my language. But I want to know is that how do I get improvement in writing.
Permalink Reply by thaesaint on November 30, 2009 at 15:02
why don't you read novels? I think you can getalot of writing patterns if you read them again and again. First, read it for general. Then, read it for new words. Next, is for details. See how they write. By the way, for what, do you want to develop writing? Is it for IELTS?
And you can attend some writing classes like YES. There isaclass named Academic writing and Issue writing. If you want to know more, please don't hesitate to ask me. Feel free to ask me.
Permalink Reply by K on April 10, 2010 at 21:52
တွေ့သမျှစာအုပ်တွေကို ဖတ်နိူင်သလောက်ဖတ်တယ်။ English လိုပြောဖို့နဲနဲလေးမှမရှက်ဘူး။ မှားသွားလို့ထောက်ပြရင်လဲ thx လို့ပြောပြီးချက်ချင်းပြင်တယ်။ သွားလေရာ dictionary ပါတယ်။ လမ်းလျှောက်ရင်း တွေ့သမျှ ကြော်ငြာလိုက်ဖတ်တယ်။ မှာနေတယ်လို့ယူဆရင် ဆရာ့ကိုချက်ချင်းမေးတယ်။ တက်ခဲ့ဘူးတဲ့သင်တန်းကတော့ ၀ံသမေဓနီပညာဒါန တစ်ခုထဲပါ။ (ဆရာဦးသာနိူးစာအုပ်လေးတွေကတော်တော်ကောင်းပါတယ်.ကျောက်ဆောက်စာပေကထုတ်ဝေတာပါ။)
Permalink Reply by Silly Fools on April 10, 2010 at 23:56
Grammar မှာဆို လမ်းမတော် (9) လမ်းက ဆရာပီတာလူးရဲ့သား ဆရာဂျူးဂျူး ဆီမှာတတ်။ သူ့ Grammar က American တွေထက်အောက်မကျဘူး.. Native speaker လို့ပြောတဲ့ Aussie တွေထက်တော့ သာပါ့ဗျာ. ကိုယ်တွေ့ပါ။
Writing နဲ့ စကားလုံးကြွယ်ချင်ရင်တော့ စာဖတ်ပေါ့။ စာဖတ်ရင်တော့ up-to-date ဖြစ်တဲ့ Magazine တို့၊ ဆောင်းပါးတို့ဖတ်ပါ။ လက်ရှိခေတ်နဲ့ ပိုကိုက်တာပေါ့။ online မှာ ဆောင်းပါးတွေ ဖတ်စမ်းပါဗျာ။ ပေါမှပေါ။ classic novel တွေ ဖတ်ရင်တော့ ဒီခေတ် ရေးတဲ့ style တွေနဲ့ တော်တော်ကွာနေလို့ practical usage ပဲ သင်တဲ့လူတွေအတွက် ရှောင်သင့်ပါတယ်။ ဥပမာ မောင်ရင်မောင်၊ မမယ်မ ဖတ်ပြီး မဟေသီကို စာမူပို့သလိုမျိုးဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်။
Speaking အတွက်ဆို English သီချင်းများများဆို၊ သင်တန်းတွေက ကောင်းပေမယ့် လက်ရှိသုံးနေတဲ့ style တွေနဲ့ နည်းနည်းကွာနေပြီ။ Hollywood ကားတွေများများကြည့် အဲဒီထဲက အတိုင်းလိုက်ပြော. အဲဒါ အရမ်းကို အရေးကြီးတယ်.. English စာတမ်းထိုးဆို ပိုကောင်းတယ်။ listening ပါတခါတည်း တတ်လာလိမ့်မယ်. စကားပြောတဲ့ style ပါသင်မှရတာ။ စတိုင်မရှိပဲ စကားလုံးတွေ အလွတ်ကျက်ပြီး ပြောရင် စာဖတ်နေသလို ဖြစ်နေတတ်တယ်။ အသက်မပါဘူးပေါ့။ English စကားပြောမှာ အသံထွက်တခုတည်းမကဘူး အသံ အဖြတ်အတောက် အသံ အနိမ့်အမြင့်က အရမ်း အရေးကြီးတယ်။ စကားလုံးဆက်တာတွေကို နားလည်ရပါမယ်.. check it out ဆို.. အသံထွက်တော့ check kit out ဖြစ်သွားတာမျိူးပေါ့. စကားလုံးတွေရဲ့ အဆုံးသတ်ကို ပီအောင်ထွက်ပါ. d. t. sh. ch. es. k. အသံပီအောင်ထွက်ပါ။ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင် ဒါတွေ အကုန်လုံးသင်ပြီးသား ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော် သတိထားမိတဲ့ စကားလုံးတွေထဲမှာ ယား ထည့်ပြောတာတော့ တော်တော် နားထောင်ရဆိုးတယ်.. ဆော့ဝဲယား ... ဟာ့ဝဲယား .. တကမ္ဘာလုံးသုံးတာက ဆော့ဝဲ(R) ဟာ့ဝဲ(R) ပါပဲ. ဒါပေမယ့် အသံထွက်အမှန်က ဘာလဲကိုတော့ သိပ်အာရုံမစိုက်ပါနဲ့။ ဒေသအလိုက် ကွဲကြတယ်.. data ကို American, British နဲ့ Aussie က ဒေတာ လို့ထွက်တယ်၊ South African နဲ့ New Zealander တွေက ဒါတာ လို့ထွက်တယ်.. dead ကို တချို့က ဒိတ်လို့ ထွက်တယ်... တချို့က ဒတ်(d) လို့ထွက်တယ်။ ဘယ်ဟာက အမှန်တော့ မရှိပါဘူး။ ရန်ကုန်သား၊ မန္တလေးသား၊ ဘိတ်သား နဲ့ ယော သားတို့ စကားပြောတာ မတူသလိုပေါ့။ British English, American English နဲ့ Aussie English တို့ရှိပေမယ့် American English လေ့လာတာ ပိုလွယ်လိမ့်မယ်။ ကမ္ဘာမှာ အသုံးများတာရယ်၊ Hollywood ကားတွေ ပိုများတာကြောင့်ပါ။
အပေါ်က မ K ပြောသလိုပဲ စကားပြောဖို့ မရှက်ပါနဲ့ English က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဒုတိယ language ပါ။ American သူငယ်ချင်းတယောက်ပြောသွားတာ မှတ်မိသေးတယ်. မင်းတို့က English ကို တော်တော်ပြောနိုင်သေးတယ်. ငါတို့ကတော့ မင်းတို့စကားကို တခွန်းတောင် မပြောတတ်ဘူးတဲ့ .. ဘယ်သူက ပိုလေးစားဖို့ကောင်းလဲဆိုတာ ရှင်းနေတာပဲတဲ့.. ကိုယ်ကိုကိုယ် ဂုဏ်ယူစမ်းပါတဲ့။
Family Album USA တို့ တခြား အဟောင်းကြီးတွေတော့ သိပ်အားမကိုးနဲ့။ လက်တွေ့ ဘယ်သူ့မှ စိတ်ပြေနပြေ ဖြည်းဖြည်း ပြောမှာ မဟုတ်ဘူး (အချိန် အရမ်းရနေတဲ့ Tourists တွေက လွဲလို့ပေါ့ )။ အဲဒီတော့ အကောင်းဆုံးကတော့ ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီး ကျင့်တာပါပဲ။
အဲဒီတော့ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ပဲလုပ်ပါ။ တကယ်ဖြစ်ချင် တကယ်လုပ် အဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်။
Permalink Reply by lynda on April 11, 2010 at 21:08
i have attended so many classes for my speaking skills.all r good in their own ways.but i am still weak in speaking.i think i don't take too much time for speaking.i also watch movies and try to say like their ways.but i am not satisfied my self.but i never give up.but now i have to take my exam in April. i try my best as Mr.Silly Fools saying.Thanksalot.